Xaalada Muqdisho oo Degen & Madaxweyne Shariif oo booqday Jiida hore – SBC
Xaalada Muqdisho oo Degen & Madaxweyne Shariif oo booqday Jiida hore
Muqdisho- Xaalada magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa 48dii saac ee la soo dhaafay degen iyadoo aan jirin wax dagaal ah oo ka dhacay inkastoo la maqlayo rasaas goos goos ah oo ka dhaceysa gobo ka mid ah jiidaha dagaalka iyo deegaano ay ku sugan yihiin ciidamada DKMG ah .
Degenaanshahan oo aan la isku haleynkarin ayaa hadana waxaa jira warar ay dadka Muqdisho isla dhexmarayaan taas oo ku aadan in xaaladahan degenaansho ay ku yimaadeen qilaafaadka u dhexeeya Madaxda sar sare ee dowlada KMG ah iyo dagaalo ay xarakada dowlada la dagaalanta ee Alshabaab ay kaga jirto gobolo ka mid ah dalka sida gobolka Galgaduud iyo Gedo.
Hakadkan ay galeen dagaalada ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay fursad u noqotay dadka iyagu ku dhaqan deegaano ka agdhowaa goobaha ay dagaaladu ka dhacayeen iyagoona bilaabay in ay u soo ban baxaan sidii ay u adeegan lahaayeen.
Dhinaca kale madaxweynaha DKMG ah ee Soomaaliya ayaa maalin nimadii shalay booqashooyin ku maray qeybo ka mid ah goobaha jiida hore ee ay dagaalada kaga jiraan ciidamada dowlada KMG ah iyo kuwa Amisom.
Madaxweyne Shariif Sh Axmed ayaa goobahaas kula hadlay ciidamada isagoona ujeediyay hadalo ku aadanaa adkeynta iyo ladagaalanka kooxaha nabad diidka ah sida uu hadalka u dhigaye.
Deegaanada uu booqashada ku tagay madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ahaa goobo ku yaala deegaanada hodan iyo Howlwadaag.